Kanye West oo kabahiisa lagu iibsaday 93 Kun oo Dollar. - iftineducation.com
Kanye West oo kabahiisa lagu iibsaday 93 Kun oo Dollar.
aadan21 / June 15, 2012
iftineducation.com – Heesaaha u dhashay Mareykanka ee lagu magacaabo Kanye West ayaa dadka ka yaabiyay kadib markuu lacag lala fajacay uu kusii iibsaday kabaha uu design qaas ah kaga dalbaday shirkada Nike iyadoo markii lagu arkay ay la yaabeen dadka waxuuna ugu dambeyn dhowr bilood kadib u iibkeenay suuqa iyadooo qiimaha lagu iibsadayna ay ahayd 93 kun oo Doolarka Mareykanka ah.
Kanye ayaa kabahan oo nuucooda yahay Nike Air Yeezy 2 , ayaa lagu iibinayay shabakada suuqa ah ee Ebay sida ay qortay shabakada TMZ ee ka hadasha arimaha dadka caanka ah , waxuuna Kanye qabay ilaa laba joog oo mid cad iyo mid madow ah.
Waxaa kabahaan ismarkiiba dalbaday fanaaniin caan ah sida Jay Z , iyo ciyaaryahanka Lebrown James ee ciyaara kubadda koleyga , iyadoo shirkada Nike ay haatan soo saartay caadiyan oo suuqa ayay keentay iyagoo ah ilaa 2 kun Doolar laakiin designka markii ugu horeysay waxaa qaas u sameystay Kanye West oo intii aysan suuqa soo galin xeranjiray.
Kanye West ayaa ka mid ah Raaperada ugu qanisan dudidan asigoo lacago badan ka sameeyay fanka ama heesaha , waxuuna jecelyahya inuu aad u labisto waliba asigoo xerta dharka qaaliga ah.
Dhalinyarada Muqdisho ku Jahwareersan Qaatina ka taagan Xulushada Gabdhaha kunool Muqdisho(Waa Maxay Sababta)